QM:Kenya Ha ka Ilaaliso Xasuuq Shacabka Duulaankeeda Kismayo | Somaale.com
QM:Kenya Ha ka Ilaaliso Xasuuq Shacabka Duulaankeeda Kismayo
Warbixin qoraal ah oo laga soo saaray xafiiska isku duwaha arimaha aadaminimo ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in kulan dhex aray madaxa xafiiskaasi iyo masuuliyiinta difaaca ee dalka Kenya, looga wada hadlay walaaca dhinaca aadami nimada ee howlgalada miltariga Kenya ee koonfurta Somalia.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in kulankan oo dhex maray isku duwaha gargaarka Qaramada Midoobay ee Somalia Mark Bowden ,Wasiirka Difaaca ee dalka Kenya Maxamed Yuusuf Xaaji iyo Taliyaha Ciidamada dalkaasi Gen Julius Karangi, looga wada hadlay ilaalinta dadka rayidka ah inta lagu guda jiro duulaanka militari ee ciidamada Kenya iyo kuwa Somalida ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Magaalada Kismayo.
Mark Bowden ayaa Masuuliyiinta Kenya ee uu la kulmay u sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la yareeyo saamaynta ay dadka Rayidka ah ku yeelanayaan dagaaladaasi.
Dhinaca kenya ayaa warbixinta lagu sheegay in wasiirka Difaaca uu balan qaaday inay Kenya ka caawin doonto dadkaasi adegyada bini aadaminimo ee ay u baaham yihiin, isla markaana ay taxadar gaar ah u yeelan doonto yareynta qasaaraha rayidka.
Waxaan dhawaan kulan Qada sharaf ah wadaa qaatay Qunsulka Soomaaliya ee shiinaha Mudane Cawaale Cali Kullane iyo wasiirka arimaha dibada ee dalka shiinaha Yang Jiechi, kulankaas oo looga hadlay arimaha la xiriiri xiriirka dalalka . 0
Shariif Xasan oo soo dhoweeyay digniinta loo jeediyay qaswadayaasha 0
‘Madaxweynaha Soomaaliya oo Jabuuti uga qaybgalaya xuska farta Soomaaliga’ 0